350+ anarana vondrona WhatsApp (Mampihomehy, Mahafinaritra ary Miavaka) - Ara-Tsosialy
Marina fa maro ny olona mampiasa Whatsapp. Tsy misy fetran-taona. Mahagaga fa manana olona an-tapitrisany mampiasa io fampiharana fandefasan-kafatra io i India. Saingy, inona no ilàna ny firesahana sy fandefasan-kafatra ny olona raha tsy misy ny anaran'ireo vondrona vondrona WhatsApp mahagaga sy tsy manam-paharoa?
Eny, tsotra izy io ary mora azo ihany koa fa mihombo isan'andro ny fampiharana fandefasan-kafatra ary manandrana misarika ny saina bebe kokoa izy ireo.Noho izany, rehefa mpitantana ny vondrona WhatsApp ianao, dia handao ny vondrona ny olona raha hitany fa mankaleo. Avy eo ianao dia havela tsy manan-tsafidy afa-tsy ny mitady fomba vaovao. Eny, ny fahazoana anarana vondrona WhatsApp tsy manam-paharoa dia mety hanampy anao tokoa!
WhatsApp Messenger dia sehatra fandefasan-kafatra voaaro. WhatsApp dia azo ampiasaina mora foana handefasana hafatra an-tsoratra, rakitra, sary GIF, horonan-tsary, ary koa hafatra am-peo ho an'ny mpampiasa hafa.
Ahoana no ahafahanao mamorona vondrona amin'ny Whatsapp?
Ireto misy dingana eto ambany hamoronana vondrona Whatsapp mora foana:
Voalohany, sokafy ny WhatsApp amin'ny telefaoninao.
Avy eo tsindrio ny menio 'Chats'
Kitiho ny bokotra menio Android anao
Tsindrio ny safidy New Group izay eo an-tampon'ny menio
Safidio ireo fifandraisana hanampiana azy ireo ao amin'ny vondrona misy anao
Manampia anarana ho an'ny vondrona misy anao
Misafidiana sary ho an'ny vondrona misy anao
Tsindrio ny marika marika eo amin'ny zoro ankavanana raha vantany vao vita ny famoronana vondrona.
Anaran'ny vondrona WhatsApp - Lisitra be mpampiasa (2020)
Anaran'ny vondrona WhatsApp tsy manam-paharoa:
Pinging tsy an-kijanona
Aza miditra amin'ity vondrona ity
Aza manimba azy
Ny vondron'ny tsiambaratelo
Izay antsoina hoe injeniera
Ireo mpanamboatra olana
Tohizo fa “manorata…”
Soraty ny lalanao
Milalao ny lalako
Aza manimba ny mahafinaritra
Antsoina hoe namana
Ireo mpikatroka atomika
Feno amin'ny masaka
Aza mitsahatra manoratra
Fitaovam-piadiana ho avy firenena
Ny hoavin'ny firenena
Tompokovavy tokana rehetra
Lohatenin'ny lohan'ny mpanjaka
Miaraka eto isika
Vondrona mpiady amin'ny avana
Aza manatevin-daharana anay
The Fab People
Mitady ny làlako
Crazy To Chat
Ny Geek Bank
Ny Fanomezana an'i Gab
Ireo Jacks mitsambikina
Ny So and so
Ny Talenta Hub
Noana noho ny olana
Anaran'ny vondrona WhatsApp ho an'ny fianakaviana iray:
Raharaha mena mifatotra
Samy manan-danja ny tsirairay
Izahay vahoaka adala
Eo amin'ny latabatra
Mizara ny rà isika
Fialokalofana amin'ny vahoaka
Izay ihany aloha
Ny zava-drehetra momba antsika
Raharaha momba ny fianakaviana
Dada ny Teny
Izy rehetra dia iray
Rehetra ao amin'ny fianakaviana
Inona ny Folk Cooking
Eo ambony vatolampy
Tsy lavorary isika
Ny (Surname) Clan
Ny Fianakaviana Sambatra
Reny miresaka indray
Fatorana amin'ny fo
Samy manokana ny tsirairay
Ny Superstars anay
Fahatsiarovana ny fahazazana
Ilay zavatra mitovy
Fianakaviana antsoina hoe andian-jiolahy
Ry tanora fo
Fianakaviana Meri Superb
Olona adala ao an-trano
Iray daholo isika rehetra
Ny fianakavianay faly
Tena Mahagaga tokoa Ianao
Mitenena ry vahoaka
Olona amin'ny fiainako
Tsy manam-paharoa isika
Ilay Fantatra Efatra
Dada no Don
Ny Kianja ho an'ny daholobe
Eny, fianakaviana izahay
Miaraka amin'ny fotoana tsara
Fatorana mandritra ny androm-piainana
Fianakaviana tonga lafatra
Ny fianakaviako mandrakizay
Anaran'ny vondrona WhatsApp ho an'ny namana:
Choppers amin'ny fahazazana
Rahalahy avy amin'ny reny samihafa
Fiainana sy mozika
Buddy tsara indrindra amin'ny fiainana
Devoly VS Anjely
Injeniera antsoina hoe
Rahalahy tsara indrindra
Troll ny rikoriko
Mpiray tampo amin'ny zanatany
Mpanjaka faran'ny herinandro
Drifters ambonimbony kokoa
Ireo resy eo an-toerana
Manerana ny sisintany
Mihoatra ny Bros
Mandehana The Line
Tsara indrindra amin'ny orinasa
Ireo Cowboy an'ny orinasa
Ny akanjo telo
Kopy kafe banga
Mpitsapa boaty mainty
Dimy dimampolo an'ny Grey's Anatomy
Lisitra mifandray amin'i Schindler
Wiki Leaks, Izahay tsy
* Anaran'ny orinasa na fanafohezana * Andevo
Ho avy ve ny fanombanana (?)
Pitcher iray ao an-tsaiko
Shanivar Raati .. (Ary ny sabotsy alina)
Ny vondrona Elite
Tsara indrindra eo amin'ireo tsara indrindra
Ireo tia kafe
Tsy misy spam
Anaran'ny vondrona WhatsApp mahatsikaiky:
Andao hampiasa fotoana sarobidy
Mpiaro ny Superman
Aza manamarin-toerana raha tsy mangataka aho
Mitady anaran'ny vondrona
404! Tsy misy ny anaran'ny vondrona
Ireo tia telegram
Aza mibanjina ny fotoana rehetra
Aza misalasala manoratra
Vondrona tsy misy fanantenana
Ny tsy fantatra
Vehivavy tokana rehetra
Midira amin'izay mety hampidi-doza anao
Ireo Lehilahy 'Eny'
Te hahafinaritra ry zalahy
Miasa mafy izahay, manao fety bebe kokoa izahay
Fantatrao ny fandavahana
Mpiara-miasa amin'ny fotsy hoditra
Planners an'ny iraka
Mitsangàna ny mpamorona
Inona no tiana holazaina amin'ny anaran'ny vondrona Whatsapp?
Tsotra be izy io. Ny anaran'ny vondrona Whatsapp dia anarana fohy na lava lava izay mifanentana amin'ny asan'ny vondrona iray amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra. Noho izany, raha mpitantana ny vondrona misy anao ianao dia afaka manome anarana miavaka azy mora foana.Amin'ny fanovana ny anaran'ny vondrona Whatsapp anao avy amin'ny anarana hafahafa ho zavatra tsy manam-paharoa, dia hametraka ny vondrona misy anao eo an-tampon'ny sy tsara indrindra any!
Ahoana no ahafahanao manova ny anaran'ny vondrona amin'ny Whatsapp?
Raha te hametraka anarana hafa amin'ny vondrona WhatsApp ianao na hanova tsotra ny anaran'ireo vondrona amin'ny Whatsapp dia araho ireto dingana eto ambany ireto:
Whatsapp Messenger aloha amin'ny telefaoninao
Mikaroha ny vondrona manokana tianao hanovana ny anarana
Sokafy ny chat group an'ny vondrona iray ihany
Tsindrio ny sary famantarana ny vondrona
Avy eo tsindrio ny kisary Pencil eo ankavanan'ny kisary sy ny lohahevitra vondrona.
Ampidiro anarana vaovao sy hafa ho an'ny vondrona, avy eo tsindrio OK.
Rehefa vita amin'ireo dingana rehetra ireo ianao dia hiova ho azy ny anaran'ny vondrona vaovao ary hampandrenesina haingana ireo mpampiasa ny vondrona iray hafa fa ny Admin dia nanova ny anaran'ny vondrona.
Mba hanatsarana ny zavatra niainanao niresaka ary hahatonga azy io ho tsara kokoa sy manaitaitra kokoa, dia afaka misafidy mora foana ny anaran'ireo vondrona WhatsApp etsy ambony ianao ary hahatonga ny vondrona misy anao ho manintona kokoa amin'ny anaran'ireo vondrona vondrona mahatsikaiky WhatsApp. Ity lisitra etsy ambony ity dia misy lisitry ny anaran'ny vondrona, manomboka amin'ny anaran'ny vondrona WhatsApp mahafinaritra, tsy manam-paharoa, tsara, mahatsikaiky ary tsara indrindra.
Jereo ny fandaharana amin'ny fahitalavitra an-tserasera (2020)
Raiso ny fihenan'ny mpianatra Disney Plus
Fuller House Season 6: Daty famoahana: Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao ao amin'ny Netflix!
WEMIX: Token, miasa, mividy, fampiasam-bola hendry | Info feno!
amin'ny sofina an-tsofina miaraka amin'ny mic ho an'ny iphone
Ahoana ny fomba hivoahana ireo fitaovana amin'ny hulu
mijery sarimihetsika an-tserasera maimaim-poana tsy misintona na misoratra anarana
taplr vonoy ny birao maody azo antoka
sarimihetsika an-tserasera maimaim-poana